UKaepernick utyikitywe kwi-Walt Disney; Iinkcukacha kwiSivumelwano seNtsebenziswano
IIminyaka emi-4 okoko umdlali webhola ekhatywayo waseMelika, UColin Kaepernick waqala ngokubonisa ukukrokrela ngenkuthalo ukuphathwa gadalala kwamapolisa kwinqanaba lakhe lempembelelo. Ngawo onke amanqanaba aphezulu kunye nawesinqe, uKaepernick ekugqibeleni uphatha imali efunekayo xa watyikitya isivumelwano esikhulu kunye neDisney. UColin Kaepernick disney utyikityiwe.
Yayingumdlalo wesithathu wesizini yokuqala yama-49ers xa uKaepernick wayehleli ngexesha loMculo weSizwe wase-US endaweni yokuma njengoko kulisiko ukwenza. Le yayiyindlela yakhe yoqhanqalazo nxamnye nokungekho sikweni kubuhlanga, ukuphathwa gadalala kwamapolisa nengcinezelo yenkqubo elizweni. Lonke ixesha lonyaka, waguqa ngexesha lomculo isenzo esaziwa njenge Thatha idolo ebelisetyenziswa kuqhanqalazo lwamalungelo abantu bokuqala kwaye ngoku lusetyenziselwa uqhankqalazo ngokuchasene nemicimbi efanayo kunye nokubonisa ubumbano.
U-Eric Reid (R) noColin Kaepernick (L)
Ayizange ihlale inje ngale nto- umanyano, oko kukuthi. Ngo-2017, xa Kaepernick warhoxa kwisivumelwano sakhe kunye ne-49ers waza waba yiarhente yasimahla, wasala engabhaliswanga de kube ngoku. Ukuchaze oku kwi-NFL ngokungqubana ngokungqubana kwamaqela namaqela ukuqinisekisa ukuba akasayinwanga ngenxa yezimvo zakhe zopolitiko kwaye njengoko babamangalela, ityala lawisa ngo-2019 emva kokuhlala ezindlini neligi. UColin Kaepernick disney utyikityiwe.
Ngoku, kumaphiko yenye yeenkampani ezinkulu zokuzonwabisa emhlabeni, Walt Disney, Kaepernick kunye nenkampani yakhe yokuzonwabisa, Umbono weRa ngokubambisana ESPN, Sayina isivumelwano sokuvelisa umxholo ophakathi wokujikeleza umba wohlanga, ukungabikho kokusesikweni kunye nokulingana kubo bonke.
Ikota yokuqala yangaphambili iya kusebenza ngokusondeleyo nentatheli yonyaka ye-ESPN, Jemele Hill -Eye wagxothwa wabiza uTrump ngokuba ngumphathi omkhulu omhlophe- njengomlimi kumdlalo wokuqala, amaphepha amathathu. Iincwadi zethu ziya kunika ibali lika-Kaepernick ngamava aphathekayo ngemiba ebekiweyo ingakumbi ngexesha lakhe kwimolela yembalela. Olu chungechunge luya kubhekiswa ngumbhali wefilimu-omnyama, Ava DuVernay.
Ndivuya kakhulu ukwazisa ukuba ndiza kusebenza njengomlimi on @ Kaepernick7Imibhalo, njengenxalenye yemveliso yakhe yokujongana ne-ESPN / Disney kunye nokudibana komxholo w / @TheUndefeated. Ndikuthatha njengelungelo ukudlala nayiphi na inxaxheba ukubalisa ibali likaColin https://t.co/awYuC3VIRe
-I-Jemele Hill (@jemelehill) Julayi 6, 2020
Kufana neminye imixholo eqokelelwa yinkwenkwezi; Iincwadi zethu ziya kuboniswa phantsi kwe-Undefeated, i-ESPN eyodwa ethe nkqo ejolise ngqo kubudlelwane bohlanga, inkcubeko kunye nezemidlalo. Ndiza kuboniswa nakwezinye iinkampani zeWalt Disney ezifana neWalt Disney Television, i-ESPN, iHulu nePstrong.
Ngale nto, amathuba angenasiphelo kwaye amkelekile ukuqhuba incoko apho kufanelekileyo kunye nokuba nefuthe kwinani elikhulu labalandeli bezemidlalo kunye nomzi mveliso ngokubanzi. UColin Kaepernick disney utyikityiwe.
Funda inqaku elipheleleyo Apha.
Ityala lemifanekiso: Instagram | Kaerpernick Isitayile sikaSmith
Ava DuVernay into yobomi abamnyama Disney kaepernick thatha idolo
NguNwabunie Arah Julayi 9, 2020
Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-2020: Ngaba ukwenza uSuku lweholide kuZwelonke kukhokelele ekulinganeni?